Microsoft waxay ka hadlaysaa cilladaha Mac soo saarista | Wararka IPhone
Microsoft waxay daabacdaa xayeysiis muujinaya khaladaadka Macs
Paul Aparicio | | Tartanka
Sidee wax walba isu beddeleen. Waxaan xasuustaa dhowr sano ka hor markii Apple uu bilaabay ololaha Mac vs PC taas oo ay ku jireen laba jilaa (midna "Mac" midna "PC") oo ka hadlayey wixii ay qaban kari waayeen iyo wixii ay qaban kari waayeen. Tusaale ahaan, mid ka mid ah xayeysiiska ayaa ka hadlay suurtagalnimada isku xirka qalabka kombiyuutarka ee Mac iyo inay "is fahmeen" (runtiina waxay ahayd atariisho ciyaaray kamarad Jabbaan ah) iyadoon la raacin darawallo (waxaan xusuusan nahay in xayeysiisyadan waa sanado kahor). Xayeysiis kale, Mac wuxuu sameyn karaa fiidiyoow waqti aan yareyn fiidiyowgaasna wuxuu ahaa gabadh kaamil ah, PC-ga mid wuxuu ahaa nin isku ekaysiiyay naag shaarubaha leh iyo dhammaantiis. Miisasku way rogeen oo waa hadda Microsoft oo bilaaba xayeysiinta oo la mid ah kuwii ololahaas.
Ololaha ay Microsoft billowday waxaa jilaya waxa ay ugu yeereen "Chick Chick". Dhexdeeda, sidaan horay u soo sheegnayba, waxay ka hadlayaan fursadaha ay Windows 10 na siiso iyo, waqtiga qorista, waxay ka kooban tahay 4 xayeysiis. Waxaad haysataa dhammaan ogeysiisyada iyo milicsiga xiisaha leh ka dib jarista.
1 Olole xayaysiis cusub oo Microsoft ah
1.1 La kulan Digaagga cayayaanka
1.2 Windows 10 iyo Inking
1.3 Windows 10 iyo Cortana
1.4 Windows 10 iyo Hello
Olole xayaysiis cusub oo Microsoft ah
La kulan Digaagga cayayaanka
Xayeysiintan ugu horeysa waa tan ugu caansan. Dhexdeeda, labada gabdhood ayaa ka muuqda oo weedh ayaa taagan oo mid ka mid ahi tidhaa «Ma haysto shaashad taabasho oo ku taal Mac-gaaga. Waan ka hinaasaa taas«. Waa inaad run noqotaa oo aad dhahdaa haa, way ku saxan yihiin taas. Ma noqon laheyd awood dheeri ah shaashadda taabashada mararka qaar.
Windows 10 iyo Inking
Inta soo hartay ee ogeysiisyada ayaa durbaba 15s dheer mid walbana wuxuu muujinayaa mid ka mid ah howlaha Windows 10. Ogeysiiskan labaad ayaa si fiican loogu dari lahaa kii ugu horeeyay tan iyo markii uu muujinayo shaashadda taabashada kaas oo laga heli karo nidaamkii ugu dambeeyay ee qalliinka Microsoft.
Windows 10 iyo Cortana
Ku dhawaaqida saddexaad, Microsoft waxay muujineysaa muuqaalka Haye, Cortana, wax aad ugu eg "Hey Siri" oo la heli karo ilaa iOS 8 (in kasta oo moodalkii hore ay ku shaqeysay oo kaliya ku xiran koronto). Sidoo kale waa wax fiican, waa inaad qirato, laakiin waa inaad dhahdaa dhammaantood: Waxaan ku haystaa Cortana laptop-ka mana u dhowdahay sida Siri ee iOS. Dabcan, Cortana ayaa heesaya, [birta birta ah] wax aannan shaqeyn karin la'aantood [/ irony mode] Si kastaba xaalku ha ahaadee, oo haddii xanta ay sax tahay, ogeysiiskan wuxuu leeyahay taariikh uu dhacayo: Juun 2016. OS X 10.12 waxaa la filayaa inuu sidoo kale ku jiro Siri, marka suurtagal ma noqon doonto in la sameeyo sida Cortana, haddii kale, fikrad, waxyaabo badan oo dheeri ah ayaa laga yaabaa in wax laga weeydiiyo dhammaantoodna waxtar ayey leeyihiin (haa, hubaal isagu nama heesin doono markii ay timaado)
Windows 10 iyo Hello
Ogaysiiskii ugu dambeeyay waxaan ku aragnaa hawl aad awoodid ku fur kumbuyuutarka kamarada webka. Markaad isku daydo nidaamyo la mid ah, uma maleynayo inay tahay habka furaha ugu amniga badan, kaliya waa inaad ka fekertaa inaan leenahay mataano mataano ah ama, sida kiiskeyga yahay, walaal ka weyn oo noocyada nidaamyadaasi aysan aqoonsan karin. Intaas waxaa sii dheer, waa in maskaxda lagu hayaa in si loo isticmaalo shaqadan ay lagama maarmaan noqon doonto inaan ku sugnaano jawi leh iftiin wanaagsan.
Maxay tahay milicsigaas aad ka hadlaysay bilowgii maqaalka? Haa haa, waa runtaa in xilligan Macs aysan lahayn shaashad taabasho, laakiin way awoodaan rakibi nidaamyada hawlgalka ee Microsoft si fudud. Sidan oo kale, 4-ta xayeysiis (seddex hadii aan xisaabta ku dareyno inay isla waxku muuqdaan labadii hore) waxaan dhihi karnaa 2 HAA inaan ku raaxeysan karno Macs qalabka Apple BootCamp. Markaa haddii aan rabno inaan adeegsanno "Hello", waan karnaa. Oo hadaan rabno inaan isticmaalno Cortana, waan karnaa.
Dhinaca kale, ilaa aad si fiican u garaneyso waxa la sameynayo (mana ahan habka ugu fudud adduunka), Windows 10 ama aaladaha dusha sare kuma shaqeyn doonaan xasiloonida OS X, mana lahaan doonaan App Store ama nidaam deegaan. sida ugu fiican Apple. Saxiix kanas, Satya Nadella 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Microsoft waxay daabacdaa xayeysiis muujinaya khaladaadka Macs
Intaa intaas kabadan waa raaxo la'aanta isticmaalka shaashadaha shaashada ee shaashadaha kaweyn 15 inji. Taasi waa sababta loo raacay trackpad si aan u dareemo isla dareenka shaashadda taabashada.
Ku jawaab ayjasociados
Waa hagaag waa inaan dhahaa kombiyuutarka aabbahay wuxuu ku yimaadaa ikhtiyaarka horay loo sii rakibay ee shaashadda taabashada (oo si firfircoon ayuu u hawlgalay) daaqadaha 8 shaashaduna MA TAHAY .. daaqadaha 10 way sii muuqataa welina lama taaban. (tag, si aad u cusboonaysiiso OS shaashadda looma beddelin taabashada… ma wax baa fashilmay?
Waxaan u maleynayaa in isticmaalka shaashadda laptop-ka sida shaashadda taabashada, in kasta oo xaaladaha qaaska ah ay si fiican u socon karto, aysan la mid ahayn shaashad gaar ah sida wacom ama, dhaqaale ahaan, kiniin ahaan ... cilladda ugu horreysa waxay leedahay kiiboodhka ...
Ku jawaab CH35C0
Meteor wuxuu na tusayaa macluumaadka cimilada ee astaanta iyo baarka xaaladda